Kooxaha cunsuriyiinta ah ee NMR oo Göteborg banaanax ka sameeyey | Somaliska
Kooxo cunsuriyiin ah oo ka tirsan kooxda Wax iska caabinta Noordiga ee NMR, ayaa maanta waxeey banaanax ku sameeyeen bartamaha magaaladda. Kooxdan oo tiro ahaan ahaa tobbaneeyo ayaa markii dambe noqday labaataneeyo.
Waxeeyna keentay in iska hor imaad ku dhex maro booliska oo isku dayey inuu xakameeyo. Dhinaca kale kooxaha ka soo horjeeda cunsuriyiinta oo iyagana konton ruux gaaraya ay soo ban baxaan si ay kooxdaasi uga hortagaan. Waxaa ay ku qelinayeen ereyo ka dhan kooxaha cusunsiryiinta ah. Goor dambe oo galabta ah ayey kooxaha cunsuriyiinta ahi, waxaa ay ka dhaqaaqeen iyadoo aan goobta ka dhacin qasaaro maadi ah.
Bishii sibtember ayaa kooxahani waxaa ay banaanbax weyni ka sameeyeen bartamaha magaaladda Göteborg, iyagoo koonayey in ay carqaladeeyaan bandhigga carwada ee Svenska bokmässan. Banaanbaxan oo guux badan dhaliyey.